अनुहारको छाला चम्किलो बनाउन स’घाउने घरेलु औ’षधिहरु – Gandaki Chhadke
एजेन्सी , उमेर नपुग्दै अनुहारको छाला चा’उरिन पुग्छ । जतिसुकै मिहिनेत गरे पनि कतिपयको अनुहार भनेजस्तो च’म्किलो हुँदैन । अनुहारको छाला च’म्किलो र मुलायम बनाउन ब्यु’टिपार्लर धाउनेहरूको पनि कमी छैन । तर, केही महत्वपूर्ण कुराको ख्याल गर्ने हो भने अनुहारको छाला सधैँ चम्किलो हुन्छ, चा’उरी पनि पर्दैन ।छालाको सौन्दर्य जोगाउने प्राकृतिक विधी भनेको, शरीरमा पानीको कमी हुन नदिनु हो । यसका लागि केहि सर्त आवश्यक छ । जस्तो, १. पर्याप्त मात्रामा पानी वा झोल पदार्थ पिउने ।
२. अनुहार एवं छालाको सरसफाईमा खा’स ध्यान दिने ।३. सन्तुलित खानेकुरा से’वन गर्ने । फा’इबरयुक्त खानेकुरा, सागसब्जी, फलफूल, सलादको से’वन गर्ने ।४. प्राकृतिक वा घरेलु सौन्दर्य प्र’साधनको प्रयोग गर्ने ।साथै अन्य घ’रेलु उपायहरु पनि अ’पनाउन सकिन्छ ।घ्यूकुमारी छालामा द’ल्नाले छाला तलको र’क्त शु’द्धीकरण हुन्छ। अनुहारमा घ्यूकुमारी द’ल्नाले ड’न्डीफोर, चि’लाउने, छाला सु’न्निने, छाला फु’स्रो हुनेआदि स’मस्या पनि कमहुन्छ। साथै घ्यूकुमारी लगाउनाले छालामा रहेका दाग बिस्तारै ह’राउँदै जान्छ।
छालामा रहेका ट’क्सिनलाई नीमले ह’टाउने गर्छ। साथै ड’न्डीफोरलाई पनि ह’टाउँछ। यसका लागि नु’हाउनुभन्दा आधाघण्टा अघि पानीमा नीमपत्ता हाल्नुपर्छ र त्यही पानीले नुहाउने गर्नुपर्छ। सुन्दर बन्न छालामा बेसार द’ल्ने चलन धेरै तिर छ। बेसनमा बेसार र चन्दन मि’साएर छालामा द’ल्ने गर्नाले छाला सफा र चम्किलो बन्दै जान्छ। दूधमा एक चिम्टी बेसार मि’साएर दिनहुँ खाने गर्नाले छाला राम्रो हुँदै जान्छ। छालामा जम्मा भएका वि’षाक्त प’दार्थलाई चन्दनले ह’टाउने गर्छ र छालालाई सफा, च’म्किलो राख्छ।
चन्दनलाई नरिवलको तेलमा मिसाई शरीर मसाज गर्नाले पूरै शरीरको छाला सफा हुन्छ र शरीरलाई आ’राम मिल्छ। गुलाब मा भिटामिन–सी प्रशस्त पाइन्छ। त्यही भएर गु’लाबजल सुत्नुअघि अनुहारमा दल्नाले ड’न्डीफोर, पोतो लगायत छालाका स’मस्या कम हुन्छन् र छाला च’म्किलो बन्छ।
कपिल शर्माको फ्यानहरुको लागि अत्यन्तै दु’खद खबर !